DHMI 9 na-ekwupụta ọnụ ọgụgụ ọnwa - RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraDHMİ 9 na-ekwupụta ọnụ ọgụgụ ọnwa
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Ụlọ elu, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Turkey 0
dhmi kwuputara onu ogugu nke onwa
General Directorate of State ọdụ ụgbọ elu State (DHMI), 2019 afọ nke ụgbọ elu ụgbọelu, ndị njem na ọnụ ọgụgụ ibu na-ekwupụta.
N'ihi ya, na Septemba; Ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu na-apụ ma na-apụ n'ọdụ ụgbọ elu bụ 77.365 maka ụgbọ elu ụgbọ elu na 75.465 maka ụgbọ elu mba ụwa. Mkpokọta njem ụgbọelu ruru 194.923 nwere oke gafere.
Na September, Turkey na-eje ozi ụlọ njem okporo ụzọ na ọdụ ụgbọelu gafee 8.668.089, 12.240.602 bụ mba njem okporo ụzọ. Mkpokọta ngagharị njem na ndị njem na-agafe agafe bụ ihe emere ka 20.929.426.
Fregbọ elu ụgbọ mmiri (ibu, leta na akpa) okporo ụzọ; Ka ọnwa Septemba dị, nha 81.084 na ahịrị ime ụlọ na tọn 244.718 n'usoro mba ụwa ruru ngụkọta nke 325.802.
MGBE 9 (JANUARY-SEPTEMBER) AIRCRAFT, PASSENGER AND LOAD TRAFFIC
2019 dị ka njedebe nke Septemba; trafficgbọ elu na-aga ma site na ọdụ ụgbọ elu bụ 636.771 na ụgbọ elu ụgbọelu na 554.646 na ụgbọ elu mba ụwa. Ya mere, ngụkọta ụgbọ elu ruru 1.550.588 nwere oke gafere.
Turkey 76.431.401 nke mkpokọta anụ ụlọ njem okporo ụzọ na ọdụ ụgbọelu, ebe mba njem okporo ụzọ n'oge a nke 84.828.052 kpọmkwem n'ụzọ njem ọnụ na ngụkọta njem okporo ụzọ guzo 161.482.868.
Fregbọ elu ụgbọ mmiri (ibu, leta na akpa) okporo ụzọ; 626.460 tọn na ahịrị nke anụ ụlọ na tọn 1.865.412 na ahịrị mba ụwa.
Gbọ elu na ebili na ọdụ ụgbọ elu Istanbul na Septemba ghọrọ 9.369 na ụgbọ elu ụlọ, 28.960 na ụgbọ elu mba ụwa na 38.329 dum. Mkpokọta njem njem 1.483.994, tinyere 4.783.667 na ahịrị ime ụlọ na 6.267.661 na ahịrị mba, ka amatapụtara.
N’ọdụ ụgbọ elu Atatürk, ebe ihe omume ụgbọ elu na ụgbọ njem na-aga n’ihu, a chọpụtara na okporo ụzọ ụgbọ elu 2019 na Jenụwarị-Septemba nke oge 130.229. N’ọdụ ụgbọ elu Atatürk, ndị njem 16.072.534 jere ozi n’oge Jenụwarị-Eprel ruo mgbe mmalite nke ọdụ ụgbọ elu Istanbul.
NUMgbọ elu 222.435 na njem ụgbọ elu 35.574.890 nọ n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul na ọnwa itoolu. Ya mere, naanị ụgbọ elu 352.664 ụgbọ elu na 51.647.424 njem ndị njem nọ na ọdụ ụgbọ elu abụọ a.
9 MONTHLY AIRCRAFT, PASSENGER NA LOAD TRAFFIC MAKA ATA
Onu ogugu nke ndi njem jere na ugbo elu 9 kwa ọnwa kariri nde 47 n'ime ugbo elu ndi njem, ebe uzo mba di karia. NUMgbọ njem ndị njem 16.035.492 na ahịrị ụlọ, 31.556.514 na ahịrị mba ụwa; trafficgbọ elu ikuku bụ 121.877 na njem ụgbọ elu na 184.790 na ụgbọ elu mba ụwa.
9 data kwa ọnwa nke ọdụ ụgbọ elu anyị na mpaghara njem dị ka ndị a:
Ọdụ ụgbọ elu Izmir Adnan Menderes natara ọrụ 6.875.544 na ụgbọ elu ụgbọ elu, ọrụ ndị 2.686.942 na ụgbọ elu mba ụwa na ngụkọta nke ndị njem 9.562.486.
N’ọdụ ụgbọ elu Antalya, e nyere ndị njem njem 5.399.599 ngụkọta, gụnyere 23.929.236 anụ ụlọ na ndị njem 29.328.835 mba.
Na Muğla Dalaman Airport, ngụkọta njem 1.280.104 na-agafe njem, gụnyere 2.711.541 na ụgbọ elu ụlọ na 3.991.645 na ụgbọ elu mba ụwa, mezuru.
Ğgbọ elu Muğla Milas-Bodrum nwere ọnụ ọgụgụ ndị njem njem ụlọ 2.089.603 na ọnụ ọgụgụ ndị njem mba ụwa 1.702.491. E nyere ndị njem njem 3.792.094 ngụkọta.
Ọnụ ọgụgụ ndị njem njem nke mba na mba na ọdụ ụgbọ elu Gazipaşa Alanya bụ 390.642. Onu ogugu nke ndi njem biara rue 526.304.
DHMI mara ọkwa ụgbọelu, ụgbọelu na ibu ọnụ ọgụgụ na February 06 / 03 / 2019 The General Directorate of State Airports (DHMI) mara ọkwa ụgbọelu, ụgbọ njem na ụtụ ọnụ ọgụgụ maka February na 2019. Ya mere, na February 2019; Ụgbọ njem ụgbọelu na-ebute na ọdụ ụgbọelu bụ 60.198 na mpaghara ụlọ na 37.037 na mpaghara ụwa. Awara okporo ụzọ na ọnwa ahụ dị ka 33.253. N'ihi ya, ụgbọelu ụgbọ elu zuru oke na-aga na nrịgo ahụ bịarutere 130.488. Ọdụ gafee Turkey a ọnwa 7.618.937 anụ ụlọ njem okporo ụzọ, mgbe mba njem okporo ụzọ bụ 5.131.874. Ya mere, n'ọnwa ahụ a jụrụ ajụjụ, birlikte
DHMI na-ekwupụta onyunyo July 07 / 08 / 2019 General Directorate of State ọdụ ụgbọ elu (DHMİ), 2019 afọ nke July, ndị ọrụ ụgbọ elu, ndị njem na ọnụ ọgụgụ ụgbọ mmiri mara ọkwa. N'ihi ya, 2019 na July; Trafficgbọ elu na-aga ma si na ọdụ ụgbọ elu bụ 79.311 na ụgbọ elu ụgbọelu na 83.547 na ụgbọ elu mba ụwa. Trafficfefefefefefefefefe na ọnwa ahụ bụ 44.660. Ya mere, ngụkọta ikuku ikuku ndị a rụrụ n'ụzọ na-agafe eruo ruru 207.518 na ngafe. Ọdụ gafee Turkey a ọnwa 9.122.161 anụ ụlọ njem okporo ụzọ, mgbe mba njem okporo ụzọ bụ 12.897.411. Ya mere, ngụkọta njem njem na ndị njem na-agafe agafe n'ọnwa kwuru…
State Ụgbọelu Authority General Manager GỤKWUO na January, 'DHMİ agba ọsọ Turkey Iberibe' 29 / 01 / 2019 Funda Ocak, onye isi nchịkwa na onye isi oche nke Ngalaba Ọdụ Ụgbọelu nke Board, kwuru ihe gbasara ọrụ ndị na-aga n'ihu na òkè o mere site na akaụntụ akaụntụ twitter ya. N'ebe a, onye isi nchịkọta akụkọ January bụ: Mba anyị, ụgbọelu ụgbọelu na ọganihu dị ukwuu na Europe, nke kachasị ngwa ngwa na Europe, ruru ebe dị n'ime ụgbọelu ụgbọelu ụwa. Obi abụọ adịghị ya na usoro atumatu njem na-arụ ọrụ n'ime afọ 17 gara aga dị irè iji wepụta ihe ngosi a. Enwere m ike ịsị na mba anyị nwere ọdụ ụgbọelu na ọdụm ugbu a karịa ndị ogbo ya n'ụwa. DHMİ bu uzo di iche iche n'ile ihe omuma na oru uzuzu di elu na nnukwu oru ngo emejuputara Hay
Agụụ Agụmakwụkwọ-Ịda Ogbenye Na-ekwupụta Ọwa Ọnwa Eprel 09 / 05 / 2017 Officer-Sen agụụ-ịda ogbenye ọkwa na April ọgụgụ: Officer-Sen kwa ọnwa mgbe nile na-enwe "site agụụ-ịda ogbenye" ​​nnyocha, 4 ndị mmadụ agụụ fọrọ maka ezinụlọ na Turkey 1.725,18 TL, ịda ogbenye akara ẹkenịmde ke 4.715,65 TL. Officer-Sen na April, dị ka agụụ-ịda ogbenye nyocha ekenịmde anya kwa ọnwa site Confederation 4 1.725,18 ndị mmadụ agụụ fọrọ maka ezinụlọ na Turkey TL, ịda ogbenye akara kpebisiri ka kwa 4.715,65. Dị ka nchọpụta ahụ si kwuo, ọnụahịa nri zụrụ site na 0,49 na nkezi n'April ma e jiri ya tụnyere March. Ọganihu kachasị elu n'April bụ tomato na mmụba nke artış
Agụụ Agụụ-Ịda Ogbenye May May Announted Numbers 08 / 06 / 2017 Officer-Sen agụụ-ịda ogbenye ọkwa na May Month osise: Officer-Sen site eduzi mgbe nile kwa ọnwa, "dị ka agụụ-ịda ogbenye" ​​Ka research pụta nke ọnwa, 4 ndị mmadụ agụụ fọrọ maka ezinụlọ na Turkey 1.696,35 TL, ịda ogbenye akara ẹkenịmde ke 4.721,80 TL . Officer-Sen Confederation ẹkenịmde anya kwa ọnwa site na agụụ-ịda ogbenye research Dị ka a na ezinụlọ Turkey na May 4 1.696,35 £ agụụ fọrọ, ịda ogbenye akara kpebisiri ka kwa 4.721,80. Dị ka ọmụmụ ahụ si kwuo, ọnụahịa nri na May belata site na nkezi 1,67 percent tụnyere April. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu na May bụ yüzde
DHMI mara ọkwa ụgbọelu, ụgbọelu na ibu ọnụ ọgụgụ na February
Agụụ Agụmakwụkwọ-Ịda Ogbenye Na-ekwupụta Ọwa Ọnwa Eprel
Agụụ Agụụ-Ịda Ogbenye May May Announted Numbers
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka omenala mara ọkwa mbubata na mbupụ
DHMI kwupụtara ụgbọelu, njem na ụgbọ ibu na 2018 Afọ
DHMI kwupụtara ụgbọelu, njem na ụgbọ okporo ígwè na November
DHMI na-ekwuputa ụgbọelu, njem na ụtụ ụgbọ njem maka March
DHMI ekwuputala '5 74 Nde Nde mmadu Na - aga'